Zayar : မမသက်ရယ်
htut khaung January 4, 2015 at 11:02 PM
khin May 29, 2015 at 9:48 AM
Kosuper Lay September 2, 2015 at 11:56 AM
that mar September 5, 2016 at 12:01 PM
tuntun October 2, 2015 at 10:10 AM
chit sar March 20, 2016 at 2:10 AM
မမ ကြီများ အဲလိုလုပ်စေချင်ရင်ဆက်သွယ်ပါဗျာ ၀၉၉၇၀၇၆၁၇၇၉
ဘာဂျာ​မောင်​ September 5, 2016 at 11:38 AM
that mar September 5, 2016 at 12:00 PM
Rocker Zaw Gyi September 6, 2016 at 11:25 AM
Rocker Zaw Gyi September 6, 2016 at 11:37 AM
Rocker Zaw Gyi September 6, 2016 at 11:39 AM
Rocker Zaw Gyi September 6, 2016 at 11:41 AM
Rocker Zaw Gyi September 6, 2016 at 11:42 AM
Tun Tun October 19, 2016 at 3:36 AM
ah February 20, 2017 at 11:19 AM
နေကြအ၇သာရှိလွန်းလို့ ကောင်းလိုက်တာ အသဲကိုခိုက်သွားတာဘဲ ​နို.​သီး​ခေါင်း ​မှာ​နီ​ရဲ​ပြီး​ထင်း​နေ​သည်​ရည်​များ ​ရွှဲ​ကာ ​ပေါင်​ကြား​သို. ​စီး​ကျ​လာ​ပါ​သည် ၊လီး​မှာ ​ကြီး​ပြီး ၇ ​လက်​မ​ခန်. ​မို. ​အ​ဆုံး ​ထိ ​ဆောင်.​ထဲ.​လိုက် ​ရာ ​ ​အီ​ဆိမ်.​ပြီး ​သား​အိမ်​ခေါင်း ​ကို​သွား​ထောက် ​သ​ဖြင်. ​အောင်. ​သွား​သည် .လီး​ကြီး ​က ​ကြီး​လွန်း ​သ​ဖြင်. ​ရှုံ​မဲ. ​ကာ ​အ​လိုး​ခံ​နေ​ရ​သည် ၊ ​စောက်​ပတ် ​လျှက်​တုန်း​က ​တ​ချီ​ပြီး ​ထား​ရ်ျ ​စောက်​ရည်​များ ​ရွှဲ​နေ​ကာ ​ဘွတ်​ဗျွတ် ​ဖြင်.​ပင်​မည်​နေ​တော.​သည်
ah February 20, 2017 at 11:20 AM
၊ .ကု​လား​၏​ ​ဒ​ရိုင်​ဘာ ​ရာ​ဂျူးလီး ​မှာ ​အ​တော်​တုတ်​ပြီး ၇ ​လက်​မ ​ခန်ဆင်စွယ်ငှက်ပျောသီးကြီး ကျနေတာပဲ(ကုလား လီးနဲလိုးရတာ အင်မတန်ကို ဇိမ်ရှိ)နီ​ရဲ​ပြီး ​အ​နောက်​သို. ​ပြူး​ထွက်​လာ​သည် ၊ . ​ခံ​လို.​လဲ​ကောင်း ​လီး ​ရှည်​သ​ဖြင်. ​သား​အိမ်​ဆောင်. ​လို. ​အောင်. ​ကာ ​အံ​ကြိတ် ​ခံ​ရင်း ​ဖင်​ကြီး ​ကို ​ငတ်​နေ ​သ​မျှ ​အ​ခု​မှ​ပင်တ​နေ.​တ​မျိုး ​မ​ရိုး​အောင် ​ပုံ​စံ ​အ​စုံ ​အ​မြဲ​လိုး​ပေး​နေ​မှာ ​တစ်ချို့ဆို
နာမည်ကြီးဆပ်ပြာတွေသုံးရဲ့နဲ့တောင် စောက်ဖုတ်က ပုတ်နေတယ်...အပျို
ah February 20, 2017 at 11:21 AM
ယား။ရွသထက်ရွပြီးပွစိပွစိဖြစ်လာကာအရည်များပါယိုစီးကျဆင်းလာသည့်ခံချင်စိတ်တို့မှာတားမရအောင်လီး​ကြီး ​ပေါ်​တင်​ပြီး ​ဂွင်း​ထု​သ​လို ​လုပ်​နေ​သည် ၊ ​မ​အေး ​လည်း ​ရင်​ခုန်​ကာ ​ဘာ​မှ ​ပြန်​မ​ပြော​နိုင်​ဘဲ ​လီး​ကြီး ​ကို​ဆုပ်​ကိုင်​ရင်း ​ကြည်.​လိုက်​ရာ ​ရာ​ဂျူး​၏ ​လီး​ကြီး​မှာ ​မဲ​ပြောင် ​တင်း​မာ​နေ​ပြီး ​မ​အေး ​လက်​ပင် ​မ​ဆံ.​အောင် ​တုတ်​နေ​တာ ​သိ​လိုက်​ရ်ျ ​စောက်​ပတ် ​ပင် ​အ​ရည်​စို ​လာ​တော.​သည်ခ​ရေ ​ကို ​က​လိ ​လိုက်မ​ရှက်​တော.​ဘဲကု​လား​၏ ​လီး​ဖြူ​ဖြူ ​ဖွေး​ဖွေး​ကြီး​တုတ်​တုတ်​..​စောက်​ပတ်​ကြီး​မှာ ​ပြူး​ပြီး ​ထွက်​လာ​၏ ရာ​ဂျူး ​ဖြေး​ဖြေး​နော် ​နင်. ​ဟာ​ကြီး​က ​အ​ကြီး​ကြီး​ပဲ ​ငါ ​ကြောက် ​တယ် ’ ‘ ​မ​ကြောက်​ပါ​နဲ. ​အ​မ​ရယ် ​ဒီ​လီး​ကြီး ​က​အ​မ ​ကို ​ကောင်း​အောင် ​လိုး​ပေး​မှာ​ပါ ’ ​ပြော ​ရင်း ​ဆောင်.​လိုး​ပါ​တော.​သည် မ​အေး ​လည်း ​န​ဂို​က​ပင် ​ဏှာ​ကြီး​ပြီး ​ထန်​သူ​မို. ​အ​ရှက်​မ​ရှိ​တော.​ဘဲ ​ဖင်​ကိုကု​လား​၏​လီး​ဖြူ​ဖြူ ​ဖွေး​ဖွေး​ကြီးကီး​မှာ ​သူ.​အ​ချက် ၂၅၀ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း​ဆောင်.​လိုး​ပြီး​ကု​လား​လုပ်​သ​မျှ​ခံ​နေ​လိုက် ​သည်​ကောင်း​လည်း​ကောင်း​ကြပ်​လည်း​ကြပ်​မိုအ​မ​လေးကု​လား​လီး​ကြီး ​သူ.​စောက်​ပတ်​ထဲ​မှ ​အ​ချက် ၂၄၀/ ​ခန်. ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း ​ဆောင်.​လိုး​ပြီး ​ပုံ​စံ​ပြောင်း​ရန် ‘ ​သ​ဇင် ​တ​မျိုး​ပြောင်း​ရ​အောင် ​ဘေး​တိုက်​နေ​ပြီးကု​လား​လီး ​အ​လိုး​ခံ ​ရ​သည်. ​အ​ရ​သာ ​စွဲ​သွား​ပါ​သည် ၊မ​နေ​နိုင်​အောင် ​ရွ​နေ​ပြီ​မို.ရ​မက်​ဆေး​ကြီး​သ​ဖွယ် ​မှီဝဲ​ရင်း... ​လေး​ဖက်​ထောက်​ပေး​လိုက်​ရာ ​ဖင်​ကြီး​ကား​စွင်.​နေ​ပြီး ​စောက်​ပတ်​နှုတ်​ခမ်း​သား ​လန်​ထွက်​နေ​ပြီး ​က​လေး​မွေး​ဘူး​တာ​မို. ​အ​ပေါက်ဝ ​ဟ​နေ​တာ ​အ​တိုင်း ​သား ​တွေ.​နေ​ရ​ပါ​သည်, ​မ​နေ​တတ်​ဘူး ​ဖင်​ချ​ရင်​လည်း​ချ​ပါ​တော. ​ဖင်ဝ ​မှာ ​ရွ​စိ​ရွ​စိ​ဖြစ်​နေ​ပြီဖင်​လေး​က ​စည်း​နေ​တာ​ဘဲ ’ ​ဟု ​ပြော ​လိုက်​ရာ ‘ ​ဟင်. ​ဟင်.ဏှာ​ထန်​ကာ ​ဖီးလ်​တက်​နေ​သည်
Zin Ko October 17, 2017 at 12:44 PM